Sida bisad looga ilaaliyo rashka | Bisadaha Noti
Rashku wuxuu cirka u iftiimiyaa dhowr jeer sanadkii. Waxay u muuqdaan inay jecel yihiin carruurta, waayeelka iyo dadka waaweyn, laakiin bisaddu ma jecla. Doofaarku wuxuu leeyahay dareen maqal oo aad uga horumarsan kanaga, si ay u maqasho dhawaqa jiirka meel 7 mitir u jirta. Haddii aan ka fikirno sida caajiska ah ee jiirku u dhawaaqayo, waxaan ogaan doonnaa sababta ay sidaa ugu baqay markii uu aadanuhu u dabaaldego xafladaha.
Waxay noqon kartaa mid aad u xun oo aad sariirta hoosteeda ku nagaan karto dhowr saacadood markay dhammeeyaan, adigoo ruxaya cabsi. Aan ogaano sida looga ilaaliyo bisadda rashka.
1 Sidee loo qaboojiyaa bisadda?
1.1 U oggolaan maayo inuu guriga ka baxo
1.2 U diyaari qol isaga ah
1.3 La ciyaar bisadda
2 Maxay rashku khatar ugu yihiin xoolaha?
Sidee loo qaboojiyaa bisadda?
U oggolaan maayo inuu guriga ka baxo
Buuq ayaa sababi doona duulimaadka degdegga ah ee raadinta meel aamin ah. Haddii aad guriga joogtid, wax dhibaato ah malahan sababta oo ah waxaad durba joogtaa goobtaas oo noloshaadu aysan qatar ku jirin, laakiin hadduu dibedda joogo ama haddii uu fasax u haysto inuu baxo, duulimaadkiisa wuxuu ku dambayn karaa lumay, ama xitaa rogmado
U diyaari qol isaga ah
Ugu yaraan maalmaha maalmaha ay jiraan rash, bisadu waa inay ku jirtaa qol xasilloon, oo dariishadaha iyo albaabadu ka xiran yihiin. Dhexdeeda waxaan ku dhejin doonnaa cunno, biyo, gogol iyo sanduuqiisa ciida, laakiin sidoo kale aad ayey muhiim u tahay inaan waqti la qaadanno, inaan la joogno, aan ka mashquulinno.
La ciyaar bisadda
Haddii aan la ciyaarno waxaan ka horjoogsan doonnaa inuu ka fekero dabka. Inta lagu jiro hawshan, waxaan gashan karnaa muusig nasasho-yar mug leh-, oo waxaan siin karnaa jacayl badan laakiin annaga oo aan ka badin. Waa inaan si caadi ah u dhaqannaa, si tartiib tartiib ah aad u fahanto inaysan khatar jirin.
Maxay rashku khatar ugu yihiin xoolaha?
Labada bisadood iyo eeyaduba 4 jeer ayey uga xasaasisan yihiin dhawaqyada sidaan u nahay, illaa heer ay pyrotechnics dhaliso iyaga tachycardia, gariir, neef qabad, lallabbo, madax wareer, xakameyn la'aan, cabsi, iyo xitaa dhimasho.
Aynu iska ilaalino isticmaalka rashka, dartii asxaabteena afarta lugood leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sida looga ilaaliyo bisaddaada rashka
Sida loo ogaado da'da kitteyda